PITTWEILER IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Pittweiler Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Rottweiler / Pit Bull Terrier yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
'Uyu ndiAchilles. Iyo yakanaka shamwari imbwa yandakambove nayo. Ndiye muchinjikwa pakati peGomba Bhuru neRottweiler. Ane simba, ane rudo uye akangwara. '
Iyo Pitweiler haisi imbwa chaiyo. Muchinjikwa pakati pe Rottweiler uye iyo Gomba Bhuru Terrier . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika 50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Kane Rottie / Pit Bull musanganiswa rudzi- 'Heuno murume wangu akanaka zvekare, anorema mukati angangoita 75 lbs. Usarega chiso ichocho chichikunyengera, iye anotapira semeso euchi ake. Ndiye murume mukuru wamhamha !! '
'Uyu mwana wangu Kane ane mwedzi miviri. Iye akasanganiswa naRottweiler naPitbull. Amai vake vaive neropa rakazara Pitbull uye baba vake vaive neropa rakazara reGerman Rottweiler. Iye imbwa inotapira uye ine simba. Mumufananidzo uyu, akayera anenge gumi lbs. '
Kira iyo Rottweiler / Pit Bull musanganiswa (Pitweiler) pazera remakore maviri
Shadow iyo Rottweiler / American Pit Bull Terrier musanganiswa (Pitweiler) pazera remwedzi minomwe
Deva - amai vake vaive American Pitbull Terrier uye baba vaive Rottweiler .
Deva sembwanana - amai vake vaive American Pitbull Terrier uye baba vaive Rottweiler .
'Yedu Marble ndeye 2-gore-gore American Gomba Bull Terrier / ChiGerman Rottweiler sanganisa. Iye ane rudo kwazvo uye ane mutsa uye imbwa yakadzikama kwazvo, asi inogona svosve uye kusagadzikana dzimwe nguva . Anofarira kuvhima mhuka diki senge tsuro neshiri. Imbwa huru yekurinda, akavimbika uye anoteerera, anoda vana, akapfava nezvose kunyanya matoyi ake nemhuka dzakazara. Anoda kumhanya uye kutamba anotora zvakanyanya sezvaanogona, uye atorawo kufarira Frisbee. Iyo imbwa yakanaka kwazvo ine ungwaru kuenzanisa Ndiye imbwa yakanakisa uye shamwari ingabvunzwa nemunhu. '
mifananidzo yemacheche makuru madhi
Dozer sembwanana— 'Ndine imbwa yakatsvinda chaizvo inonzi Dozer. Iye ari RottenPit. Amai vake vaive vakazara Rottweiler uye baba vaive vakaguta Pitbull . Dozer akanaka chaiko neavo vaanoziva asi ari kure nevasingazive. Kana angodziya iwe anozove shamwari yako yepamwoyo !! Iye murume akangwara kwazvo, anoziva kuita gara , famba zvakanaka kwazvo pa leash uye mirira pamikova uye anokumirira kuti uise chikafu chake pasi uye asachibate kusvikira wati chiwane. Dozer ane masvondo gumi nemana chete okuberekwa !!! '
Dozer sembwanana— 'Tinomudaidza kuti RottenPit' nekuti anogona kunge achipenga sezvavanouya, anoda kutamba neshamwari dzake mbiri dzepamwoyo Ladi, a Doberman uye maJaxs, a Min Pin . Iye anogara mukati medu uye nevamwe vake canine shamwari uye anorara pamubhedha. Dozer imbwa inotyisa uye tinomuda zvakanyanya. '
Pittweiler Mifananidzo 1
Chinyorwa cheAmerican Pit Bull Mix Imbwa Dzakaberekwa
American Gomba Bull Terrier Ruzivo
miniature schnauzer yakasanganiswa neshih tzu
dzvuku mhino pitbull uye boxer musanganiswa
cocker spaniel dachshund musanganiswa wekutengesa
3 vhiki yekare boxer puppy
Mwedzi mitanhatu yakatarwa st bernard
1 gore rekare saint bernard